चित्रकारलाई यसपाली खोकनाले किन आकर्षित गर्यो ? « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
चित्रकारलाई यसपाली खोकनाले किन आकर्षित गर्यो ?
ललितपुर, ११ कात्तिक । ललितपुरको खोकना शुद्ध तोरीको तेल र ताइचिन चिउराले प्रख्यात छ । यहाँका सुन्दर गैरी खेत र हराभरा फाँटहरु त्यसैका लागि बनेका हुन् झै लाग्छ ।
यही कारण चित्रकारलाई यसपाली खोकनाले आकर्षित गरायो । “पाँच वर्षअघिको हराभरा अहिले धेरै हराइसके, अब २÷४ वर्षमा खोकनाको प्राकृतिक सुन्दरता मेटिन्छ, दृष्यमा भने पनि कैद गर्नुप¥यो”, खोकनाको सुन्दरता चित्रमा उतार्दै कलाकार केशवराज खनालले भन्नुभयो ।
प्रकृतिमा यति धेरै कला हुन्छ, छानेर चित्रमा उतार्नुपर्छ, कोठामा बसेर कोरेको चित्रभन्दा प्रकृति हेरेर दृश्य दृश्य उतार्न चुनौती हुन्छ । छिनछिनमा प्रकृति फेरिन्छ । “हरेक रुख हरियो नै हुन्छ तर त्यसका हरियोका रङ्गहरु फरक–फरक हुन्छन्, चित्रमा उतार्नुु नौलो सिकाइ हो”, सुन्दर फाँट र सिकाली मन्दिर चित्रमा कैद गर्दै कलाकार रामकृष्ण थापाले भन्नुभयो ।
विसं २०५३ देखि ललितकलाको शिक्षासँग चित्र कोर्न थाल्नुभएका थापालाई प्रकृतिमा बसेर चित्र उतार्न औधी मन पर्छ । शनिबारे खोकना अभियान पनि उहाँले छुटाउनुभएन । कलाकारलाई लाग्छ, सबै विधाको गुरु नै प्रकृति हो । आँखाले देख्ने रङ्गहरु यहाँबाट सिक्ने हो । कलाको निखारता प्रकृतिले दिन्छ ।